खुदी खोला किनारका १४ परिवार विस्थापित - Sarangkot NewsSarangkot News
खुदी खोला किनारका १४ परिवार विस्थापित
16 September, 2020 9:18 am
अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ३२ स्थित खुडी खोला किनारामा वसोवास गर्दै आएका १४ घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने दुई वटा घर खोलाले तानेको छ । दुई घर वगाएपछि जोखिममा परेका १४ घर परिवारलाई स्थानिय समाज घर र नजिककैको सिता आधारभूत विद्यालयमा अस्थायी वसोवासको प्रवन्ध मिलाइएको वडा नं. ३२ का वडा अध्यक्ष अक्कल वहादुर कार्कीले वताए ।
खोला किरानमा अव्यवस्थित वसोवासका कारण वाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको तर्फ राज्यको ध्यान नपुग्दा धनजनको क्षति वढ्दै गएको छ । सरकारले अव्यवस्थित वसोवास र सकुम्वासी वस्तीको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, खोला किनार र भिरालो डाँडा र फेदीको वस्तीमा व्यापक क्षति पुगेको छ ।
खुदी खोला किनारमा भएको क्षति र पीडितको राहतका लागि महानगर विपत् व्यवस्थापनले कार्य अगाडि वढाएको र रेडक्रसले तत्कालिन राहत स्वरुप त्रिपाल, खाद्यन्न उपलव्ध गराएको वडा अध्यक्ष कार्कीले वताएका छन् । यो वर्ष वढी वर्षा भएको र वर्षा अरु जारी रहेकोले सजगता अपनाउन जरुरी रहेको सूचना अभियन्ता मेघनाथ आचार्यले वताए ।